चीनका चर्चित ‘स्टन्ट’ यानगिङको ६२ तल्लाबाट खसेर मृत्यु – Ekathmandunepal
[ ६ बैशाख २०७५, बिहीबार २१:४३ ] स्तन र योनी कत्रो हुनुपर्छ ?	खेलकुद
[ ६ बैशाख २०७५, बिहीबार २१:४० ] खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ?	स्वास्थ्य
[ ६ बैशाख २०७५, बिहीबार २१:३४ ] यौन चाहना तीव्र हुँदा पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखौँ जस्तो लाग्छ	कथा
[ ६ बैशाख २०७५, बिहीबार २१:३० ] म बाहिर हेर्दा खुसि छु तर मिठो सेक्स कहिले भएन- के कारण मान्दैनन् मेरा बुढा सेक्स गर्न,पढ्नुहोस	कथा
[ ६ बैशाख २०७५, बिहीबार २१:२४ ] म २० वर्षकी भए र मैले केटासाथीसँग यौनसम्बन्ध राखिसकेकी छु ,फेरि …	खेलकुद
Homeअन्तर्राष्टियचीनका चर्चित ‘स्टन्ट’ यानगिङको ६२ तल्लाबाट खसेर मृत्यु
चीनका चर्चित ‘स्टन्ट’ यानगिङको ६२ तल्लाबाट खसेर मृत्यु
२७ मंसिर २०७४, बुधबार २०:४१ ekathmandunepal अन्तर्राष्टिय 0
बेइजिङ– चीनको इन्टरनेट स्टार हुँ यानगिङको खतरनाक स्टन्ट गर्ने क्रममा ६२ तल्लाको बिल्डिङबाट खसेर निधन भएको छ। स्टन्टको दुनियाँमा उनी स्टार मानिन्थे। उनको उमेर २६ वर्षको थियो।
यानगिङ ठूलो बिल्डिङमा स्टन्ट गरेको भिडियो सोसल मिडिया एप विबोमा अपलोड गर्ने गर्थे। त्यति बेला पनि उनी खतरनाक स्टन्ट गर्दै थिए। उनले यसका लागि ६२ तल्लाको बिल्डिङको छनोट गरेका थिए।
स्टन्ट गर्दा उनको पकड कमजोर भएपछि तल खसेका थिए। यो स्टन्टका लागि उनलाई १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अफर भएको थियो। बिल्डिङ ४५ फिट अग्लो थियो।
दुर्घटनाको पूरै भिडियो क्यामरामा कैद भएको छ। यानगिङले स्टन्ट गर्नुभन्दा केही अगाडि क्यामरा जडान गरेका थिए। घटनाको केही समयपछि सफाइ कर्मचारीको आँखा यानगिङको शरीरमा परेको थियो।
नको निधन ८ नोभेम्बरमा भएको तर घटना ८ डिसेम्बरमा मात्र सार्वजनिक भएको बताइएको छ।
करिब एक महिना यता उनको भिडियो पोस्ट नभएपछि उनका समर्थक व्याकुल बनेका थिए। यानगिङकी साथी जिनजिनले बेइजिङ न्युजलाई दिएको जानकारी अनुसार यो स्टन्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि दुवैको विवाह गर्ने योजना थियो।
लाइभ स्ट्रिमिङ भिडियो साइट ‘भोल्कानो’मा यानगिङको ३ सय भिडियो अपलोड छ भने १० लाख फलोअर्स छन्। लाइभ स्ट्रिमिङ बापत उनले ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँदै आइरहेका थिए। जिनजिनका अनुसार जुन बिल्डिङमा दुर्घटना भएको थियो, त्यो बिल्डिङको ४४ तल्ला मात्र खुला हुने गर्थ्यो।
बन्द रहने गरेको बाँकीको १८ तल्लामा यानगिङ स्टन्ट गरेर पुगेको हुन सक्ने बताइएको छ। उनको निधनले उनका फलोअर्सलाई दुःखी तुल्याएको छ। उनीहरूले सोसल मिडियामा यानगिङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
दाई दाई ? २५० रुपैया जाने हो ? काठमाण्डौको रत्नपार्क टुवाइलेट, वाथरुम आदी स्थलमै यौन बजारकालागि अखडा
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (265)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (241)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (76)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (54)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (45)
फिल्ममा आउँनु अघि यस्ता थिए नेपाली चलचित्रका चर्चित… (40)
यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेर्नु सहि कि गलत ? (40)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (39)
यौन चाहना तीव्र हुँदा पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखौँ जस्तो लाग्छ
म बाहिर हेर्दा खुसि छु तर मिठो सेक्स कहिले भएन- के कारण मान्दैनन् मेरा बुढा सेक्स गर्न,पढ्नुहोस
म २० वर्षकी भए र मैले केटासाथीसँग यौनसम्बन्ध राखिसकेकी छु ,फेरि …
सुगौली सन्धीमा गुमेको नेपालको भूमि भारतबाट फिर्ता गराउन बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए “रोमान्टिक यौन”
यो सपिङ्ग मलमा २२ रुपैयाँ भाडामा छानीछानी तरुनी पाइन्छ
विद्या बालनलाई करणको प्रश्न, ‘यौन सम्पर्कपछि के खान्छ्यौ ?’ यस्तो विद्याको उत्तर !
एक कोरियन युवतीको योनीको रौ फालिदि गरेको दृश्य… (5,464)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,377)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,238)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,812)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,575)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,381)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,372)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,337)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,215)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,210)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,207)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (2,019)
“भाउजु, कति दिन तड्पेर बस्नुहुन्छ ? आज म तपाईंको… (1,956)